Into Omele Uyazi NgoLouis Farrakhan: I-Biography
I-Biographie yesizwe samaSulumane uLouis Farrakhan
I-Scandal ayizange ithinte inxaxheba kwiminyaka
Umphathiswa uLouis Farrakhan ungomnye wabantu abanobunzima kakhulu e-United States. Ngoxa i-scandal idibanise iinkokheli ezininzi, uFarrakhan uye wakwazi ukuhlala enamandla kumandla ezopolitiko aseMelika, ubudlelwane beentlanga kunye nenkolo . Ngeli biography, funda kabanzi malunga nobomi beSizwe soMbutho we-Islam kunye nendlela ahlala efanelekileyo kwiMelika ehluke kakhulu.
Minyaka yo kuqala
Njengabantu abaninzi baseMelika abaphawulekayo, uLouis Farrakhan wakhulela kwintsapho yabangaphandle .
Wazalelwa ngoMeyi 11, 1933, eBronx, eNew York. Bobabini abazali bakhe bathuthela eMelika baseCaribbean. Unina, uSarah Mae Manning, wayevela kwisiqithi saseSt. Kitts, kunye noyise, uPercival Clark, bevela eJamaica . Ngo-1996, uFarrakhan uthe uyise, obikwa ukuba wayenomhlaba wasePortugal, unokuba ngumYuda. Umphengululi kunye nomlando-mlando uHenry Louis Gates wabiza i-Farrakhan ibango elithembekileyo, kuba ama-Iberiya aseJamaica athambekele ekubeni ne-Sephardic Jewish ancestry. Ngenxa yokuba uluntu lwamaYuda luye latsholwa uFaro Farrakhan ukuba ngumchasi-mema, izibango zakhe malunga nookhokho kayise ziyamangalisa, ukuba ziyinyaniso.
Igama lokuzalwa likaFarrakhan, uLouis Eugene Walcott, lityhila ingxabano kubazali bakhe. UFarrakhan uthe ubaba wakhe wayethabathele umama kwizandla zomntu ogama linguLouis Wolcott, owayenomntwana kunye naye aguqukela kuyo kwiSilamsi. Waceba ukuqala ubomi obutsha noWolcott, kodwa wadibanisa ngokufutshane noClak, obangela ukukhulelwa okungenakulungiswa.
UManning wazama ngokuphindaphindiweyo ukukhupha ukukhulelwa, ngokutsho kukaFarrakhan, kodwa ekugqibeleni wagqiba ekupheleni. Xa umntwana efika, enesikhumba esiluhlaza kunye neenwele, i-auburn izinwele, uWolcott wayesazi ukuba umntwana wayengenguye noManning wakhe. Oku akuzange kumvimbele ekuqamba igama lomntwana "uLouis" emva kwakhe. Kodwa ubaba ka-Farrakhan wangempela akazange adlale indima ebalulekileyo ebomini bakhe, wathi.
Unina wahlala yinyathelo elizinzile. Umthandi womculo, wamtyhila kwi-violin. Akazange athathe umdla ngokukhawuleza kwisixhobo.
Uthi: "Ekugqibeleni ndathandana nesixhobo," kwaye ndandiyichukumisa ngenxa yokuba ngoku ndiza kungena kwindawo yokuhlambela ukuba ndiyisebenzise ngoba yayinomsindo onjengawe studio kwaye angena kwindawo yokuhlambela ngoba uLouis wayehlala kwindawo yokuhlambela. "
Uthe xa uneminyaka eyi-12 ubudala, wadlala ngokufanelekileyo ukuze enze kunye ne-Boston civic symphony, i-Orchester yaseBoston kunye ne-glee club. Ukongeza kokudlala i-violin, Farrakhan wacula kakuhle. Ngo-1954, esebenzisa igama elithi "The Charmer," waze wabhalwa nomntu ongatshatanga "Buyela emuva, uBelly eBelly," isembozo se "Jumbie Jamboree." Unyaka ngaphambi kokurekhoda, uFarrakhan watshata nomkakhe uKhadijah. Waba nezingane ezithoba.
I-Farrakhan enokumculo yayilungele ukusebenzisa iitalente zayo kwinkonzo yesizwe sama-Islam. Ngoxa wayesebenza, waya kwintlanganiso yeqela, elathi uEliya Muhammad waqala ngo-1930 eDetroit. Njengeenkokeli, uMuhammad wafuna ilizwe elihlukile kuma-Afrika aseMelika kunye nokwahlukana kobuhlanga. Umholi we-NOI ophakamileyo uMalcolm X wancenga Farrakhan ukujoyina iqela.
Ngoko, wakwenza, nje nje emva konyaka ukurekhoda yakhe engatshatanga. Ekuqaleni, uFarrakhan wayeyaziwa ngokuthi nguLouis X, kwaye wabhala ingoma ethi "Izulu laseMhlophe lingumntu weNtsundu yaseMnyama" kwiSizwe.
Ekugqibeleni, uMuhammad wanika uFarrakhan igama lakhe elidumile emhlabeni namhlanje. Farrakhan wasukuma ngokukhawuleza kwiqela leqela. Uncedise uMalcolm X kwi-Mosque ye-Boston mosque kwaye wayenendima ebaluleke kakhulu xa uMalcolm washiya eBoston ukuba ashumayele eHarlem .
Ngo-1964, ukunyanelana okuqhubekayo kunye noMuhammad kwaholela uMalcolm X ukuba aphume kwiSizwe. Emva kokuhamba kwakhe, uFarrakhan wayeyifumene, womeleza ubuhlobo bakhe noMuhammad. Ngokwahlukileyo, ubuhlobo be-Farrakhan no-Malcolm X bukhula buhlungu xa lo mva wagxekisa iqela kunye nenkokeli yalo.
Ngokukodwa, uMalcolm X watshela ihlabathi ukuba uM Mohammad uzalise abantwana kunye nabaninzi babhala bakhe.
UMalcolm X wayemjonga njengomzenzisi, ekubeni UNO washumayela ngokumelene nokulala ngesondo. Kodwa uFarrakhan wayebhekiselele kuMalcolm X umthengisi wokuvakalisa ezi ndaba kuluntu. Kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokubulawa kukaMalcolm kwi-Harlem's Audubon Ballroom ngoFebruwari 21, 1965, uFarrakhan wathi ngaye, "umntu onjalo ufanelwe ukufa."
Xa amapolisa abamba amathathu amalungu e-NOI ngokubulala uMalcolm X oneminyaka engama-39 ubudala, abaninzi bazibuza ukuba u-Farrakhan wadlala indima ekubulaleni. UFarrakhan wavuma ukuba amazwi akhe anamandla ngoMalcolm X mhlawumbi "asinceda ukudala umoya" wokubulala.
"Mhlawumbi ndibe ngenyameko ngamazwi endiwathethayo ukuya kutsho ngoFebhuwari 21, " UFarrakhan utshele intombi kaMalcolm X uAthallah Shabazz kunye no-"60 Minutes" umthunywa kaMike Wallace ngo-2000. "Ndiyavuma kwaye ndizisola ukuba nawaphi na ilizwi zithe zadala ukulahlekelwa ngumntu wobomi. "
U-Shabazz oneminyaka emithandathu ubudala wabona ukudubula, kunye nabantakwabo kunye nonina. Wabonga Farrakhan ngokuthatha uxanduva kodwa wathi akazange amxolele.
"Akazange avume oko phambi koburhulumente," watsho. "Kuze kube ngoku, akazange amkhathaze abantwana bakabawo. Ndiyambulela ngokuvuma ukunyaniseka kwakhe kwaye ndiyamnqwenela uxolo. "
Umhlolokazi kaMalcolm X, uBotty Shabazz , othe wabuyela eFarrakhan ukuba abe nesandla ekubulaleni. Kubonakala sengathi wenza izilungiso kunye naye ngo-1994, xa intombi yakhe uKubilah ibhekene neentlawulo, kamva wehla, ngenxa yecebo lokumbulala.
Farrakhan Iqala i-NOI Splinter Group
Iminyaka elishumi elinanye emva kokubulawa kukaMalcolm X, uEliya Muhammad wafa.
Kwakukho ngo-1975, kwaye ikusasa leqela labonakala liqinisekile. UMuhammad ushiye unyana wakhe uWarith Deen Mohammad ephethe. Omncinane uMuhammad wayefuna ukuguqula i-NO kwiqela lamaSilamsi elibizwa ngokuba yi-American Muslim Mission. (Malcolm X naye wamkela i-Islam yemveli emva kokushiya i-NOI.) I-Warith Deen Mohammad nayo yamkela iimfundiso zikayise zohlula. Kodwa Farrakhan akavumelani nalo mbono waza washiya iqela ukuqala inguqu ye-NOI ehambelana nefilosofi kaEliya Muhammad. Waqala kwakhona iphephancwadi ye-Final Call ukupapasha iinkolelo zeqela lakhe.
UFarrakhan wabandakanyeka kwezopolitiko. Ngaphambili, i-NOI yayitshele amalungu ukuba ayeke ukubandakanyeka kwezombusazwe, kodwa u-Farrakhan wanquma ukuvumela u-Jesse Jackson u-1984 ukucela umongameli. Bobabini i-NOI kunye neqela lika-Jackson lobulungisa bezentlalo, i-Operation PUSH, lasekelwe kwi-Chicago Side South. Iintlobo ze-Islam, inxalenye ye-NOI, yayilinda noJackson ngeli phulo layo.
"Ndiyakholelwa ukuba ukuvota kuka-Rev. Jackson kuye kwaphakamisa itywina ngonaphakade kwiingcamango zabantu abamnyama, ingakumbi abatsha abamnyama," kusho uFarrakhan. "Akunakuze kubekho ulutsha lwethu olucinga ukuba konke okungaba yiimvumi kunye nabadlali, abaculi kunye nabadlali bebhola kunye nabadlali bezemidlalo. Kodwa ngoMfundisi Jackson sibona ukuba sinokuba ngabafundi, izazinzulu kunye nento. Ngenxa yento enye wayenza yedwa, wayeza kuvota. '
Noko ke, uJackson akazange anqobe umnyanzelo wakhe wokhetho ngo-1984 okanye ngo-1988. Wadala umkhankaso wakhe wokuqala xa ebhekisela kumaYuda ngokuthi "Hymies" kunye neSixeko saseNew York ngokuthi "Hymietown" Umnyathelisi omnyama waseWashington Post.
Ingqungquthela yokuqhankqalaza eyalandela. Ekuqaleni, uJackson wayephikile loo mazwi. Emva koko, watshintsha amaYuda kunye namaYuda atyhola ukuba azama ukucima umkhankaso wakhe. Kamva wavuma ukuba enze iimpendulo waza wabuza amaYuda ukuba amxolele. Kodwa wenqaba ukwahlukana neFarrakhan.
UFarrakhan wazama ukukhusela umhlobo wakhe ngokuya kwi-radiyo kwaye esongela uMphathiswa wePost, uMilton Coleman kunye namaYuda malunga nokunyanga kukaJackson.
"Ukuba uyalimaza lo mzalwana [uJackson], kuya kuba ngowokugqibela ukulimaza," watsho.
UFarrakhan kuthiwa ubiza uCleman umrhwebi waza watshela abantu base-Afrika baseMerika ukuba bamgweme. Inkokeli ye-NOI nayo ijongene nokumangalelwa kokusongela ubomi bukaColleman.
"Ngenye imini siza kukugweba ngokufa," kusho uFarrakhan. Emva koko wayephika ukusongela uCleman.
I-Farrakhan iqhuba uMbutho weSizwe
Nangona iFarrakhan sele ijongene neengxelo zokuchasana namaYuda kwaye igxeka amaqela amnyama njengama-NAACP, uyakwazi ukuhlala efanelekileyo kwiMelika eguqukayo. Ngo-Oktobha 16, 1995, umzekelo, wahlela umlando weMillion Man ngoMatshi kwiSizwe seMall eWashington, DC iinkokeli zamalungelo oluntu, kuquka uRosa Parks, uJackson noShazz, bahlangene kweso siganeko esenzelwe amadoda aseAfrika aseMelika ukuba acinge Imiba ecinezelayo ekuchaphazela uluntu olumnyama. Ngokwezinye iingqikelelo, malunga nesiqingatha sezigidi zabantu baye bahamba. Olunye uqikelelo luchaza isihlwele esikhulu njengezigidi ezimbini. Kwimeko nayiphi na into, akungabazeki ukuba amakhulu eminyaka abantu bahlangene kweso sihlandlo, impumelelo enkulu kumntu nawuphi na umququzeleli.
I-website yeSizwe yamaSulumane ibonisa ukuba umkhonto ucelomngeni olunzima lwabantu base-Afrika baseMerika.
"Ihlabathi alizange libone amasela, izigwenxa kunye nokuzikhusela njengoko zidlalwa ngokugqithiseleyo kumculo oqhelekileyo, iifilimu kunye nezinye iindlela zeendaba; ngaloo mini, ihlabathi labona umfanekiso ohluke kakhulu kumntu omnyama waseMelika. Ihlabathi yabona amadoda amnyama abonisa ukuzimisela ukuthwala uxanduva lokuphucula ngokwabo kunye noluntu. Kwakungekho namnye olwa nomnye umntu ongabanjwa ngaloo mini. Kwakungekho ukutshaya okanye ukusela. IWashington Mall, apho kuqhutywe khona uMatshi, yahlala yicocile njengoko yafunyanwa. "
UFarrakhan kamva walungiselela iMatshi yeeMillion ka-2000 ngoMatshi. Kwaye emva kweminyaka engama-20 emva kweMillion Man March, wakhumbula isiganeko esibalulekileyo.
UFarrakhan wathola indumiso kwi-Million Man March kodwa nje emva konyaka wabuya waphikisana. Ngo-1996, watyelela eLibya . Emva koko umbusi waseLibya, ekupheleni kweMuammar al-Qaddafi, wenza umnikelo kwiSizwe samaSilamsi, kodwa urhulumente wephondo akazange avumele Farrakhan ukuba asamkele isipho. Nangona ziganeko ezinjalo kunye neluhlu olude lweengxelo ezivuthayo, uFarrakhan uphumelele inkxaso yabantu nabangaphandle kommandla omnyama. Bakhawula i-NOI ngokulwa nokungabikho kokungabikho kokungabi nabulungisa, ukuxhasa imfundo kunye nokulwa nodlova, phakathi kwezinye izinto.
Umbukeli uMichael L. Pfleger, umfundisi ongumRoma Katolika ongcwele kunye neparishi e-Chicago South Side ngumzekelo. Wabiza uFarrakhan umcebisi wakhe osondeleyo.
"Ndilahlekelwe ngabahlobo kwaye ndilahlekelwe inkxaso -ndisusiwe kwiindawo-ngenxa yobuhlobo bam noFarrakhan," umbingeleli wachazela iNew Yorker ngo-2016. Kodwa wathi, "Ndiza kuthatha ibhola [yena nabanye] nawuphi na umhla weveki. "
Okwangoku, uFarrakhan uyaqhubeka nokuvelisa izimvo zakhe. Kungekudala emva kokuvulwa kukaDonald Trump, wabiza iUnited States "isizwe esibolile kakhulu emhlabeni."
I-1812 Ukunikezelwa kwe-Fort Detroit kwakuyiNtlekele kunye neScandal
I-Japanese-American Internation eManzanar NgeMfazwe Yehlabathi II
UCharles Darwin - Imvelaphi Yakhe yeeNdlobo Yakha iTheory of Evolution
Imbali yePublic Democrat Party
Ulungiso lwe-17 kuMgaqo-siseko wase-US: Unyulo lwabaSebenzi
Ngaba i-Moby Dick iWhale Whale?
Indlala enkulu ye-Irish: Ukujika kwe-Ireland kunye neMelika
Ukunyamekela iingubo zakho zeebhayisike
Uvavanyo lweNermed: Iimvavanyo ezixhaswa kuzo zonke iindawo
ABCs Ingoma Hlalani kunye
Ukuphela koStalker Night, uRichard Ramirez
I-Top Shojo Manga I-Must-Reads
Ukuqonda amaTable eFluency for Progress Monitoring in Reading
Yintoni iComposition Composition of Sweat Human or Perspiration?
8 yeeNkantyezi eziqhekezayo eUnited States
Udliwano-ndlebe noDancer - Ukuqonda ukuphulaphula
Iimpawu eziqhakambisayo malunga ne-Stink Bugs
ULee & Clark College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
2016 I-US Open Opening Qualification Results
Juz '15 yeQuran
Izibhengezo ezili-10 ezinamandla kwiBukumkani bezilwanyana
UJuan Gabriel: UMexican Singer-Songwriter kunye noMqambi
Iintsingiselo zeFrench French Idiom 'Avoir du Pain sur la Planche'
Brando, Littlefeather kunye neeMbali ze-Academy
Top 10 Celine Dion Iingoma
I-Interface Intervals (SI) kunye neScuba Diving
Amaqhinga eKellyanne Conway